खनिजयुक्त पानीको सेवनले ढाडको समस्या कम हुन्छ | Bhalakushari
सामान्यतया गर्दनको पछाडि (घिच्रो) र नितम्बबीचको मध्यरेखामा हुने दुखाइलाई ढाड दुख्नु भनिन्छ । मेरुदण्डका हड्डी र मांसपेशीलाई असर गर्ने रोगले ढाड दुख्छ । ढाड दुखाइकै कारण अधिकांशले काममा ध्यान दिन सक्दैनन् । नेपालमा गलत किसिमको खानपान, रहनसहन र बसाइले ढाड दुख्नेहरूको सङ्ख्या धेरै छ । समयमै उपचार गरे ढाड दुखाइ निको पार्न सकिने डा. सरोज सुवाल बताउँछन् । हामीले खाने पानी शुद्ध भए तापनि आवश्यक खनिज (मिनरल) तङ्खव नहुँदा हड्डीमा समस्या देखिने उनको भनाइ छ । जनवादी गणतन्त्र चीनको हुवेई प्रान्तस्थित याङ्गत्से विश्वविद्यालयबाट अर्थोपेडिक्समा माष्टर इन सर्जरी (एमएस) गरेका डा. सुवाल मध्यपुर अस्पतालमा अर्थोपेडिक सर्जनका रूपमा कार्यरत छन् । चीनकै चियामुसी विश्वविद्यालयबाट एमबीबीएस गरेका डा. सुवालसँग ढाड दुख्ने समस्या र समाधानका उयायबारे पूर्णभक्त दुवालले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
ढाड दुख्नुको मुख्य कारण गलत तरीकाले काम गर्नु वा बस्नु नै हो । ढाड वा नजीकको मांसपेशीमा असर परेर यस्तो समस्या शुरू हुन्छ । कुर्सीमा बसेर बढी समयसम्म काम गर्नेलाई ढाडको समस्या धेरै हुन्छ । एउटै ‘पोजिशनमा’ बस्दा पछाडिको मांसपेशी एकदमै थाकेको हुन्छ । ढाडलाई अप्ठ्यारो गरेर राखिराख्दा पनि मांसपेशी थाकेर ढाड दुख्छ । नेपालमा लामो समयसम्म बाइक चलाउने र दिनभर कम्प्युटर चलाउनेको ढाड दुख्ने समस्या धेरै देखिएको छ । बढी तौल हुनु पनि ढाड दुख्नुको अर्को कारण हो । आसन ठीक भएन भने पनि ढाड दुख्छ । लामो यात्राको समयमा समेत यो समस्या आउँछ । एउटै आसनमा २० मिनेटभन्दा धेरै बेर बस्दा वा जुनसुकै काम गर्दा पनि ढाड दुख्छ । यस्तो दुखाइलाई ‘मेकानिकल पेन’ भनिन्छ ।
ढाड दुखिरहनु, आलस्य हुनु, जीउ कमजोर हुनु, थकान हुनु, शरीरमा गाँठागुठी हुनु ढाड दुख्नुका लक्षण हुन् । दुखाइको उपचार दुखाइ के कति कारणले भएको हो, सोहीअनुसार गर्नुपर्दछ । ढाडको दुखाइको पहिचान रक्त परीक्षण, मूत्र परीक्षण, एक्सरे, सीटी स्क्यान, एमआरआई आदि विभिन्न तरीकाबाट गर्न सकिन्छ । यदि नसा च्यापिएको छ भने अलि बढी ध्यान दिनुपर्छ । नसा च्यापिएको छ भने अन्य समस्या पनि आउँछ । १२ सातामा पनि ठीक भएन भने सर्जरी नै गर्नुपर्ने हुन सक्छ । हड्डी खिइएर भएको हो भने हड्डी रगडिएर नसा निस्कने बाटो साँघुरो हुँदै जान्छ । नसा च्यापिएपछि नसाहरू खुम्चिन्छ, जसले गर्दा मांसपेशी कमजोर हुन्छ । मांसपेशी कमजोर भएपछि बिरामीलाई दुख्छ । पाठेघरमा समस्या भए÷नभएको निक्र्योल गर्नुपर्छ । पिसाबको परीक्षणसमेत गर्नुपर्छ । कसैलाई स्थायी रूपमा ढाड पनि दुख्छ । यस्तो बेलामा बेलाबखत फिजियोथेरापी गरिरहनुपर्छ । यसले मांसपेशीलाई बलियो बनाउँछ ।नसा च्यापिने समस्या कुरकुरे हड्डी फुटेर र हड्डी खिएर पनि हो । यो क्रोनिक खिइएर हुन्छ । यस्तो समस्या ६०–७० वर्ष कटेपछि मात्रै हुन्छ । तर, कुरकुरे हड्डी फुट्यो भने युवा उमेरमा पनि यो समस्या आउँछ । नसा च्यापियो भने खुट्टा झमझम हुन्छ ।
हड्डीको समस्यासँग धुम्रपानको केही सम्बन्ध छ कि ?